आ’गो लाग्नबाट बचिन् एश्वर्य राय, बचाए शाहारुखले, सलमानले भने,‘ तिमी रियल हिरो हौ ।’ – Khabaarpati
October 17, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on आ’गो लाग्नबाट बचिन् एश्वर्य राय, बचाए शाहारुखले, सलमानले भने,‘ तिमी रियल हिरो हौ ।’
एजेन्सी । विश्व सुन्दरी एवंम् बलिउड अभिनेत्री एश्वर्य रायलाई बचाएका छन् बलिउडका बादशाह शाहारुख खानले । शाहारुख खानले एश्वर्य रायलाई आ’गो लाग्नबाट बचाएका हुन् । यो कुरा थाहा पाएर बलिउडका भाईजान सलमान खानले शाहारुखलाई‘तमी रियल हिरो हौ ।’ भनेका छन् ।
खासमा के भएको थियो त त्यस्तो घटना ? जस्मा अभिनेत्री एश्र्वय अलिकतिले जोगीईन् घटना हुनबाट । अनि कसरी जोगाए शाहारुखले उनलाई आउनुस् यी सबै कुरा तपाईलाई हामी भन्ने छौं । कुरा एश्वर्यको घरमा भएको एउटा पुजाको हो । जहाँ पुजाको तयारी निकै नै धुमधामका साथ भईरहेको थियो । आफ्ना आफन्त र केही नजिकका सेलीब्रेटीहरुलाई पनि निम्त्याईएको थियो । जस्मा शाहारुख खान पनि थिए ।
सोही पुजामा एश्वर्य रायको मेनेजरले लगाएको लेहेंगामा आ’गो लागेको थियो । जुन आ’गो देखेर त्याहाँ उपस्थित सबै जना आत्तिएका थिए । एश्वर्यले त्यो आ’गो निभाउन लाग्दा शाहारुखले एश्वर्यलाई पछि घकेल्दै आफुले एश्र्वको मनेजरको लेहेंगामा लगेको आ’गो निभएका थिए । त्यसरी आ’गो निभाउँदा शाहारुखको पनि ज्याकेटमा आ’गो लागेको थियो । ज्याकेटमा आ’गो लागेको हुनाले शाहारुखलाई थोरै आगोले पोलेको थियो । तरा मानविय क्षति हुनबाट जोगिए पनि शाहारुखलाई भने हस्पिटल लगिएको थियो ।
यही कुरा जब बाहीरियो तब सबैभन्दा पहिला सलमान खानले प्रतिकृया दिएर भनेका थिए,‘शाहारुख तिमी रियल हिरो हौ । हिरो त्यो हुन्छ जस्ले वास्तविक जीवनमा आ’गोले पोलिनबाट अरुलाई जोगाउँछ । यू आर द रियल हिरो ईन माई लाईफ एण्ड फर द पिपल ।’ भन्दै शाहारुखको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेका थिए । शाहारुख खानले क्यामेराको अगाडी मात्र नभई वास्तविक जीवनमा पनि स्टण्ड गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणीत गरिदिएका छन् ।
सलमानको यो प्रतिकृया भलै शाहारुखकोलागी होला तर सोसल मिडिया युजरसले यस्लाई एश्वर्यकोलागी सलमानको चिन्ता भनेर टिप्पणी गरेका छन् । किनभने सलमानले यदि कसैलाई साँचो माया गरे त त्यो हो एश्वर्यलाई । एश्वर्यको विबाह पश्चात सलमान खानले एश्वर्यलाई आजका दिनसम्म कहिल्यै पनि नराम्रो भनेका छैनन् । न त उनका परिवारलाई नै भनेका छन् । यसैबाट थाहा हुन्छ कि सलमानले अझैं पनि एश्वर्यलाई कति माया गरिरहेका छन् भन्ने कुरा ।
एश्वर्य र कट्रिनालाई सलमान खानले यस्तोसम्म गरेका रहेछन्, जुन कुरा सुनेपछि उड्यो सबैको होस्
केहिदिन अगाडी ७० लाखको गाडी किनेकी पुजा शर्माको नयाँ लुक्स सार्बजनिक !
यस्ती छिन् विश्वचर्चित रेस्लर जोन सेनाकी नवबिवाहित श्रीमती
February 19, 2021 goodmam
दिलिप रायमाझीकी छोरी दिब्याका सुन्दरता (फाेटाे फिचर)
April 10, 2021 goodmam